Somaliland oo ku dhawaaqday xaalidihii ugu badnaa ee Coronavirus mar qura ay diiwaan-gelisay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Somaliland oo ku dhawaaqday xaalidihii ugu badnaa ee Coronavirus mar qura ay...
Wasiirka Caafimaadka Somaliland, Cumar Cali Cabdullaahi
Hargeysa (Halqaran.com) – Somaliland ayaa waxay ku dhawaaqday xaaladihii ugu badnaa oo mar qura ay ka diiwaangeliso deegaanadeeda, tan iyo markii xanuunka COVID-19 laga xaqiijiyay Somaliland.
Wasiirka Caafimaadka Somaliland, Cumar Cali Cabdullaahi iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xeergeeye oo gelinkii dambe ee Jimcihii shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Hargeysa ayaa xaqiijiyay in 11 qof oo cusub laga helay xanuunka.
Bukaanadan ayaa waxay ku kala sugan yihiin Magaalooyinka Boorama, Hargeysa, Burco iyo deegaanka Yuufle ee Gobolka Sanaag.
Wasiirka ayaa sheegay in mid ka mida bukaanada cusub ee xanuunka laga helay uu ku geeriyooday Magaalada Hargeysa ee Xarunta Somaliland.
Xaaladaha cusub ee laga diiwaangeliyay Somalkiland ayaa waxay tirada guud ee deegaanada Somaliland laga xaqiijiyay ka dhiseysaa 23 qof, 3 bukaana ay ugu geeriyoodeen.
Cudursidaha COVID-19 ee uu keeno Coronavirus ayaa waxaa muuqata in uu si weyn ugu faafayo geyiga Soomaalida ay degto.
Waxay aheyd,khamiistii markii Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, Fowsiya Abiikar Nuur ay sheegtay in kiisaska dalka oo idil laga diiwaangeliyay ay gaarayan 928 xaaladood.
dad badan oo laga helay Coronavirus
Somaliland oo diiwaangelisay